K-Pop Idol အများစုဟာ ဘာ​ကြောင့် ကမ္ဘာ​ကျော် ဇိမ်ခံဖက်ရှင် Brand ​တွေရဲ့ ကိုယ်စားပြုဖြစ်လာရတာလဲ | News Bar Myanmar
K-Pop Idol အများစုဟာ ဘာ​ကြောင့် ကမ္ဘာ​ကျော် ဇိမ်ခံဖက်ရှင် Brand ​တွေရဲ့ ကိုယ်စားပြုဖြစ်လာရတာလဲ
၂၀၁၉ ခုနှစ်​လောက်ကစပြီး ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဇိမ်ခံ brand အများစုဟာ သူတို့ကုန်ပစ္စည်း​တွေကို K-Pop idol ​တွေနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စတင်​ကြေငြာလာခဲ့ပါတယ်။ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီဟာ Celine, Dior, Chanel, YSL စတဲ့ ဇိမ်ခံဖက်ရှင် brand ​တွေကို ကိုယ်စားပြုကြပြီး Red Velvet အဖွဲ့ဝင် Irene က Prada ရဲ့ မျက်နှာဖုံးဖြစ်သလို IU က Gucci ရဲ့ ​မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
EXO အဖွဲ့ဝင် Kai, Chanyeol, Sehun နဲ့ Baekhyun တို့က Gucci, Prada, Dior နဲ့ Burberry စတဲ့ brand အသီးသီးရဲ့ ကိုယ်စားပြုဖြစ်သလို BTS အဖွဲ့ဟာ Louis Vuitton ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဒါတင်မက​သေးပဲ aespa လို ပွဲဦးထွက်တာ ၁ နှစ်မပြည့်​သေးတဲ့ အဖွဲ့အသစ်က​တောင် Givenchy ရဲ့ မျက်နှာသစ် ​မော်ဒယ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အမှန်​တော့ K-Pop စတား​တွေတင်မကပဲ အာရှတစ်လွှားမှာရှိတဲ့ အနုပညာရှင်​တော်​တော်များများဟာ ထိုဇိမ်ခံ brand ​တွေရဲ့ သတိပြုစိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံ​နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ တရုတ်အဆို​တော် Jackson Yee က Armani Beauty ရဲ့ ကိုယ်စားပြုဖြစ်သလို ဂျပန်​မော်ဒယ် Koki က Estée Lauder ကို ​ကြော်ငြာ​မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်​လောက်ကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်​တောင်မှ ဒီလိုဇိမ်ခံပစ္စည်း​တွေကို ကိုယ်စားပြုတာဟာ ဥ​ရောပက နာမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီး​တွေနဲ့ ​မော်ဒယ်​တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဆို ဘယ်အရာကများ ​ပြောင်းလဲ​စေခဲ့တာလဲ? ဘာလို့ K-Pop စတား​တွေက ကမ္ဘာ​ကျော် ဇိမ်ခံဖက်ရှင် brand ​တွေရဲ့ မျက်နှာဖုံး​တွေ ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါလဲ?
လန်ဒန်မှာ​နေထိုင်တဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်း​တွေကို သု​တေသနပြုလုပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Rocky Chi က​တော့ ဒါဟာ ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်​​ရောဂါ​ကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို​တော့ အ​နောက်တိုင်း ဇိမ်ခံပစ္စည်း​တွေကို ဝယ်ယူကြတဲ့သူ အများစုဟာ တရုတ်နိုင်ငံက အလည်အပတ်လာ​ရောက်သူ​တွေ ဖြစ်ကြလို့ပါ။
ခရီးသွားလာမှု ကန့်သတ်ထားတာ​ကြောင့် ဥ​ရောပကို ခရီးသွားလို့ မရ​တော့သလို ဒီလို ဇိမ်ခံပစ္စည်း​တွေကို ဆိုင်မှာ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီး ဝယ်ယူလို့လည်း မရ​တော့ပါဘူး။ ထို့​ကြောင့် မကြာမီမှာပဲ ဇိမ်ခံ brand ​တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ​ဖောက်သည်အများစုက အာရှကဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံလိုက်ရပါ​တော့တယ်။
ထို့​ကြောင့်ပဲ brand ​တွေဟာ အာရှနိုင်ငံ​တွေက နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်​တွေကို သူတို့ရဲ့ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ လိုအပ်လာပါ​တော့တယ်။ ဒါမှသာ ဝယ်ယူသူ​တွေကို ပိုဆွဲ​ဆောင်နိုင်ပြီး ​ရောင်းအားမြင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အ​နောက်တိုင်းက လူ​တွေက ဒီအာရှက အနုပညာရှင်​တွေကို မသိကြ​ပေမဲ့ ဒါက ပြဿနာ​တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ယခင်ကလည်း အ​နောက်တိုင်း ​မော်ဒယ်​တွေရဲ့ ပုံ​တွေကို ဘုတ်​တွေ​ပေါ်မှာ တင်ထား​ပေမဲ့ အာရှက လူ​တွေက ဝယ်ကြသလိုပါပဲ။ ဒါ့အပြင် K-Pop ကို လူသိများလာတာကလည်း အ​ကြောင်းအရင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
K-Pop ဟာ ကမ္ဘာအဝှမ်းများ နာမည်ကြီးလာပြီး ​ဟောလီးဝုဒ်မှာ အာရှက အရည်အချင်းရှိ အနုပညာရှင်​တွေ တိုး​ပေါက်လာတာနဲ့အမျှ အာရှအနုပညာရှင်​တွေဟာ ဇိမ်ခံ brand ​တွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာဖို့ အခွင့်အ​ရေးများ​လေ​လေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ​ဒါတင်မက​သေးပဲ K-Pop Idol ​တွေဟာ အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ ဝယ်ယူသူ​တွေကို ပိုပြီး ဆွဲ​ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်း​တွေကို ဝယ်ယူတဲ့ လူငယ်ဦး​ရေကို တိုးလာ​စေပါတယ်။ ​
နောက်ဆုံးတစ်ချက်က​တော့ ဥ​ရောပသား​တွေဟာ အာရှကိုမကြည်တဲ့ ပြဿနာ​တွေ​ကြောင့်အ​နောက်တိုင်းသား​တွေကို ဦးစား​ပေးတဲ့ ​ကြော်ငြာစနစ်ကို စွန့်ခွာပြီး သူတို့ရဲ့ ​ကြော်ငြာ​တွေမှာ လူမျိုး​ရေးကွဲပြားမှုကို ထည့်သွင်းလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်​တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လာမယ့်နှစ်​တွေမှာ ​နောက်ထပ် K-Pop စတား​ပေါင်းများစွာဟာ ကမ္ဘာ​ကျော်ဇိမ်ခံဖက်ရှင် brand ​တွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်​တွေဖြစ်လာဦးမယ်ဆိုတာ အ​သေအချာပါပဲ။
Next ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲ ‘Girl from Nowhere’ ကို Boycott လုပ်နေကြတဲ့ တရုတ်အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူများ »
Previous « Disband ဖြစ်သွားတဲ့ Kpop အဖွဲ့တွေ ဘယ်အချိန်မှာ ပွဲဦးထွက်ပြီး ဘယ်ချိန်မှာ ပြိုကွဲသွားကြသလည်းဆိုတော့...